भालेन्टाइन डे मा आफ्नो प्रिय व्यक्तिलाई कस्तो उपहार दिने ? प्रेम प्रस्ताव गर्नु अघि जान्नुहोस यी कुरा ! – Himalitimes
२०७५ फाल्गुन २ ००:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । आज फेव्रुअरी १४ अर्थात प्रणय दिवस, विश्वभर एक आपसमा उपहार अनि प्रेम साटासाट गरी भालेन्टाइन डे मनाइँदैछ।
विशेषगरी युवापुस्तामा लोकप्रिय प्रणयदिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डेमा विश्वभर नयाँ प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई प्रेम प्रस्ताव गरी मनाउने गरिन्छ । प्रेमका पक्षधर सन्त भालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको फेव्रुअरी १४ मा भालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको छ।
पश्चीमा मुलुकबाट भित्रीएको भ्याईटाईन डे अर्थात प्रणय दिवस नेपाली युवाहरु माझ पनि पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । खासगरी यो दिनना धेरैका धेरै योजना छन् ।
आफ्नो प्रिय व्यक्ति वा प्रेमिकालाई यस दिनमा नया नौलो ठाउँमा घुमाउन लैजाने, सपिङ गर्ने र मायालाई प्रगाढ बनाउने कोसिस धेरैको हुने गर्छ । कोही भने यहि मौका छोपी कसैलाई मुटु दह्रो पारेर प्रेम प्रस्ताव राख्ने जमर्केा गर्दैछन् ।
तत्कालिन समयमा प्राचीत रोम सम्राज्यका क्लाउडियस द्धितीयले युवाहरु प्रेम र विवाहमा लागे मुलुकको सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छ भनेर यसलाई प्रतिवन्ध लगाएका थिए । तर भ्यालेनटाईनले भने सम्राटको यो कुरालाई धर्म विरुद्धको भन्थे । त्यसैले उनले युवाहरुलाई प्रेम र विवाहका लागि प्रेरीत गर्नुका साथै सामुहिक विवाह समेत गराएका थिए । तर यो कदम चालेकाले उनलाई ईसापूर्व २७० को फेवु्रअरी–१४ का दिन मृत्युदण्ड दिईएको थियो । उनकै सम्मानस्वरुप भ्यालेनटाईन डे भनेर मनाईदै आईएको छ ।
भ्यालेनटाईन डे मा कस्तो गिफ्ट छान्ने त ?
प्रणय दिवसमा यदी कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु छ भने कसैको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुछ भने पहिले त्यो व्यक्ति कस्तो खालको हो , उसको व्यवहार कस्तो छ, भोलीकादिनमा आइपर्ने दुःख र सुःखमा साथ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेकुरामा ध्यान दिन आवस्यक छ । विशेष गरी दुवैजनाले एक अर्कोलाई मनपराएको हो भने तपाईहरु एकअर्कालाई वढि वुझ्न कोसिस गर्नुहोस ।
अझ अर्कोकुरा ‘भ्यालेनटाईन डे’ को दिन विशेष भनिएको चिज विशेषनै मानिने भएकाले गिफ्ट छान्दा ख्याल गर्नुहोस् । तपाईंको प्रिय् मान्छेलाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन अनिवार्य रातो गुँलावको फुल सँगै अरु आकर्षक चिजहरु दिनुहोस । आफुलाई मन पर्ने गिफ्ट भन्दा पनि आफुले मन पराएको वा आफ्नो मान्छेको मन वुझेर गिफ्ट दिने गर्नुहोस, जसले गर्दा झन मायाँ वढ्छ ।’
महिलाहरुको सवालमा भने सधै प्रयोगमा आउने व्याग दिनुहोस , पार्टि व्यागहरु, व्राण्डेड सुजहरु, चप्पलहरु, घडिहरु दिदा राम्रो हुन्छ । अनि केटा मान्छेलाई हो भने उसको लागी स्पेशल लाग्ने चीजहरु सर्ट,पाईन्ट, टिसर्ट, घडि,मोबाइल वा कुनै ट्यावहरु दिनुहोस ।
भ्यालेनटाइन डे को उपलक्ष्यमा आफ्नो भ्यालेनटीनोलाई अनेकौं प्रकारको उपहार महँगो मुल्यका गिफ्ट दिनु भन्दा तपाई जसलाई अटुट माया वा हृदय देखी नै माया गर्नुहुन्छ उसको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो अरु केहीपनि हुदैन ।